Coordination meeting on repatriation holds
Sittway, May 24
A coordination meeting on the matters of repatriating and resettling returnees was held at the Rakhine State Government’s building on 25 May.
At the meeting, Rakhine State Chief Minister U Nyi Pu said restoration of peace and stability had been carried out ever since the violent attacks on 25 August 2017. Consequently, the state government was not only performing repatriation and resettlement of returnees, but also planning for their long-term socio-economic development in collaboration with the union government.
Next, Vice Chairman (2) of the Repatriation and Resettlement of Returnees Committee and Deputy Minister for the Office of the State Counsellor U Khin Maung Tin explained the process of implementing directions from the President’s Office, preparing temporary lodging for returnees at the reception centres, distributing humanitarian aid, preparing transportation, providing security, and keeping records of all activities.
This was followed by departmental officials in attendance explaining their completed processes and collaboration between relevant ministries, to which the Deputy Minister and Chief Minister provided suggestions and discussions.
— Tin Tun (IPRD), The Global New Light of Myanmar
Myanmar-Bangladesh Border Guard Force Battalion commander-level meeting holds
Naypyitaw, May 24
Myanmar-Bangladesh Border Guard Force Battalion commander-level meeting was held on 23 May on the Bangladesh side near the Friendship Bridge.
At the meeting, the Myanmar border guard force asked Bangladesh to remove the installation of four CCTV cameras and 10 solar-powered security lamps near the borderline as soon as possible because they break the rules of the United Nations. Myanmar objected Bangladesh’s ignorance of human habitation andagrowing population near the borderline and said that this action constituted Bangladesh’s support of illegal activity. Myanmar also reminded the Bangladeshi border guard of Myanmar’s offer to hand over five Bangladeshi people found onafishing boat but Bangladesh had not replied yet. The Myanmar side also proposed to promote exchange of information between the two countries.
Myanmar reiterated Bangladesh to stop construction of any structures in the non-construction zone near the borderline and objected to Bangladesh’s rations delivery and giving escorts to those who deliver the rations.
Bangladesh urged Myanmar to reduce the announcements by loudspeakers near the border as the noise caused anxiety for their nationals living in Bangladesh, and to reduce the volume of the broadcasts as there are schools and trainings nearby on their side. The Bangladesh border guard said there are still difficulties in repatriation though high-level bilateral meetings are being held. They urged Myanmar’s security forces to inform Bangladesh when security measures along the border are carried out. They also asked the Myanmar side to holdaproposed regional commanding officer-level meeting and to inform Bangladesh when infrastructures near the border are built.
နေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်လက်ခံရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း စည်းဝေးပွဲ ကျင်းပ
စစ်တေ၊ွ မေ ၂၄
နေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်လက်ခံရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို မေလ ၂၄ရက်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးညီပု က ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့ အကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်များနောက်ပိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် အတတ် နိုင်ဆုံး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ နောက်ဆုံးအခြေအနေအရ ပြန်လည်လက်ခံရန်နှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရန်အပြင် ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသည့်လူများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရေရှည်လူမှု ဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့နှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါ ကြောင်း ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် နေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်လက်ခံရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးကော်မတီ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ (၂) နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်တင်က နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ညွှန်ကြားချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေး၊ ပြန်လည် ဝင်ရောက်သူများကို လက်ခံရေးစခန်းများတွင် နေရာချထားရေး၊ လူမှုကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများ ဖြန့်ဝေရေး၊ ကြိုပို့ယာဉ်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရေး၊ လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ပေးရေးနှင့် မှတ်တမ်းများ ထားရှိရေးတို့ကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍ တက်ရောက်လာကြသော ဌာနဆိုင်ရာများမှ မိမိတို့ဌာနအလိုက် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနအချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည့် အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးတင်ပြကြရာ ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တို့က ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ပေးကြကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံ တပ်ရင်းမှူး အဆင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံ နယ်ခြားစောင့် တပ်ရင်းမှူးများအဆင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို မေ၂၃ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးတံတားအနီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ခြမ်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည်။
ဆွေးနွေးပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံ နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့က နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်မျဉ်းအနီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံဘက်ခြမ်းတွင် CCTV ကင်မရာ ၄လုံး တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် လုံခြုံရေး ဆိုလာမီးတိုင် ၁၀ တိုင်တပ်ဆင်ထားခြင်း များသည် ကုလသမဂ္ဂ စည်းမျဉ်းအရ မလုပ်သင့်သဖြင့် အမြန်ဖယ်ရှားပေး စေလိုကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံ နယ်နိမိတ်မျဉ်းအနီး လူဦးရေတိုးပွားလာမှုများကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ အနေဖြင့် လျစ်လျူရှုပြီး ထောက်ခံအားပေးသည့် သဘောဆောင်နေကြောင်း၊ ငါးဖမ်းစက်လှေ နှင့်အတူ တွေ့ရှိထိန်းသိမ်းထားသည့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသား ၅ ဦး တို့အား လွှဲပြောင်း ပေးအပ်ရန်အတွက် အကြောင်းကြားထားသော်လည်း ယခုအချိန်အထိ အကြောင်းပြန်ကြား လာခြင်း မရှိကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံ သတင်းဖလှယ်မှုအား ယခုထက်ပိုမိုတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ပေးရန် အဆိုပြုပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံဘက်က နှစ်နိုင်ငံ နယ်နိမိတ်မျဉ်းအနီးရှိ အဆောက်အဦ မဆောက်လုပ်ရန် တားမြစ်ထားသည့် ဇုန်အတွင်း၌ တဲအသစ်များ ထပ်မံတိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ခြင်းများအား ရပ်ဆိုင်း ပေးစေလိုပြီး ရိက္ခာလာရောက်ပေးပို့နေမှုများနှင့် လုံခြုံရေး လိုက်ပါကူညီပေးနေမှုများကို ကန့်ကွက် ပါကြောင်း ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်ခြားစောင့်က နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်မျဉ်းအနီးတွင် မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ အသံချဲ့ စက်များဖြင့် ပြောဆိုနေသဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်နေထိုင်သည့် နိုင်ငံသားများမှ စိုးရိမ်ပူပန်နေပြီး စာသင်ကျောင်းများ၊ သင်တန်းကျောင်းများရှိသဖြင့် ၎င်းအသံချဲ့စက်ဖွင့်ခြင်းအား အသံလျှော့ချ ပေးရန် ၊ နှစ်နိုင်ငံအဆင့်မြင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်နေသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ နေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်ရေးကိစ္စမှာ အဆင်မပြေမှုများ ဖြစ်နေသေးကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်တစ်လျှောက်တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်အနေဖြင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုများ ရှိပါက မိမိတို့ထံ အသိပေး အကြောင်းကြားစေလိုကြောင်း၊ ဒေသ ကွပ်ကဲရေးမှူးအဆင့် တွေ့ဆုံပွဲ အစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်လိုကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်မျဉ်းအနီး အဆောက်အဦများ ဆောက်လုပ်မည်ဆိုပါက မိမိတို့ထံ အသိပေးစေလိုကြောင်း ပြောကြားသည်။